ဟုတ်တယ်၊ ရှာဖွေရန်ရှာဖွေရန်ကောင်းသောဘလော့ဂ်များအများကြီးကျန်သေးသည်။ ဒီနေရာတွင်သူတို့ကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း Martech Zone
ဟုတ်တယ်၊ ရှာဖွေရန်ရှာဖွေရန်ကောင်းသောဘလော့ဂ်များရှိသေးသည်။ ဤတွင်သူတို့ကိုမည်သို့ရှာရမည်နည်း
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 5, 2018 Douglas Karr
ဘလော့ဂ်များ? ငါတကယ်ဘလော့ဂ်ရေးတာလား။ ကောင်းပြီ၊ ယခုငါတို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားတရားဝင်ထီးသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, blogging ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ရှုထောင့်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်များရောက်ရှိရန်အသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ ငါတကယ်တော့ဟူသောဝေါဟာရကိုသဘောပေါက်ဘူး ဘလော့ဂ် obselecense အထိကြီးထွားလာမယ်၊ ဒါပေမယ့်အရင်ကထက်အများကြီးနည်းသွားတယ်။ တကယ်တော့ငါဒီမှာမကြာခဏဆောင်းပါးများထက်ငါ့အအရေးအသားကိုရည်ညွှန်းသည် ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ.
ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များ၏ဆိုဒ်များကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေသည်နှင့်တခါတရံဘလော့ဂ်ဟူသောဝေါဟာရကိုသူတို့၏ဆောင်းပါးစုဆောင်းမှုဖော်ပြချက်တွင်မထည့်သွင်းပါ။ ဒီတော့ဘလော့ဂ်ဆိုတာဘယ်တော့မှဘလော့ဂ်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ မသေချာဘူး…ဒါပေမယ့်အချိန်ကာလအတိုင်းအတာအရဆင်းသက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်တိုက်ရေးဖို့ဆိုတာသင်အွန်လိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသုံးပြုနေသောပလက်ဖောင်းများသည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘလော့ဂ်များဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ စုစည်းရန်အတွက် feeds များပါ ၀ င်သည်။ ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စကားလုံးများနှင့်လူကြိုက်များမှုသည်ယခုအခါတွင်အသုံးမပြုတော့ခြင်းသာဖြစ်သည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အမြဲတမ်း ၂၀/၂၀ ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါရေးတဲ့အချိန်မှာဒီအသုံးအနှုန်းဟာသိပ်မမြန်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ် Dummies အတွက်ကော်ပိုရိတ် Blogging။ ရှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်၊ ငါစာအုပ်ထဲမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းဗျူဟာများနှင့်အကြံဥာဏ်အများစုဟာယနေ့ထိတိုင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနေဆဲပါ။ အချို့သောပလက်ဖောင်းများပျောက်ကွယ်သွားပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ဘလော့ဂ်များသည်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရလဒ်ကောင်းများဆက်ဖြစ်နေသည်မှာသေချာသည်။
feed စာဖတ်သူတွေကိုသုံးမယ့်အစား၊ ရှေးရှေးကဆိုရှယ်မီဒီယာကနေဆောင်းပါးတွေကိုသုံးပြီးဝေမျှတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည် Google Blog Search အငြိမ်းစားယူလိုက်သည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုအခြားမည်သည့်အကြောင်းအရာနှင့်မှ ခွဲခြား၍ မရတော့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, Google မှာရှိပါတယ် သတင်း…သတင်းအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်မိုဘိုင်း application နှင့်အင်ဂျင်၊ အများစုမှာဘလော့များသာဖြစ်သည်။ သင့်ဘလော့ဂ်ကိုထည့်သွင်းလိုပါကသင်လုပ်နိုင်သည် Google News တွင်ကြေငြာသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပါ။ ဂူဂဲလ်သတင်းတွင်၎င်းကိုမေးမြန်းခြင်း၏ထူးခြားသောနည်းလမ်းအချို့ရှိသည်။ တစ်နည်းမှာ RSS output ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင် (ဥပမာ) ကိုရှာဖွေပြီး output = rss ကိုထည့်ပါကစုစည်းထားသောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များမှရလဒ်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ဤတွင်ဂူဂဲလ်သတင်းကို အသုံးပြု၍ RSS ရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီ blogger ကွန်ရက်လမ်းညွှန်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း၊ ကြီးစွာသောဘလော့ဂ်တွေကိုအွန်လိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့တခြားနည်းလမ်းအတော်များများရှိတယ်၊ Blog အသစ်များရှာဖွေပါ။ သူတို့ကအပါအဝင်နည်းလမ်းများစွာ, အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်
အသုံးပြုခြင်း Google Search ကို curated ဘလော့ဂ်များစာရင်းရှာဖွေရန်။
ဘလော့ဂ်များကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေခြင်း Feed Reader
ဟုတ်ပါတယ်, အသုံးပြု လူမှုမီဒီယာ Facebook, Twitter နှင့် Pinterest တို့လိုပင်။
ရှိပြီးသားအသုံးပြုခြင်း directories အွန်လိုင်းမှာအတော်များများဟာတက်ကြွပြီးတိကျနေတုန်းပဲ။
တွေ့ရှိချက် ဘလော့ခ်များ ရှိပြီးသားဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်။ ဤရွေ့ကားဘလော့ဂါအကြံပြုသော bookmarked ဘလော့ဂ်များစာရင်း။
Tags: ဆောင်းပါးများစာရေးသူဘလော့ဂ်Blog searchဘလော့ဂ်blogrollအကြောင်းအရာစျေးကွက်directory များလမ်းညွှန်feed reader ပါဂူဂဲလ်သတင်းgoogle Searchပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းလူမှုမီဒီယာစာအရေးအသား